Ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị ugbu a na Outlook maka Office 365 | Gam akporosis
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa na Outlook nke mere na ọ ga - eme ya n'oge niile na Office ngwa niile
El ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị ugbu a na Outlook N'oge na-adịghị anya, ọ ga-emekwa nke a na ngwa ndị ọzọ dị na Microsoft Office 365 suite. Nke ahụ bụ, mgbe ị gara ịrụ ọrụ n’etiti Excel ma ọ bụ Okwu, ọnọdụ ọchịchịrị ahụ ga-adị iji dịrị n’otu asụsụ a haziri na ihu ọnụnọ.
Outlook, otu n'ime ndị ahịa email kachasị eji n'ụwa eme ihe, nwere ọnọdụ ọchịchịrị a. Obu ihe gbasara awa inwere ike inwe ya ma si otú ahụ webata ya na ngwa ndị ọzọ na akwa akwa.
N'ezie, Microsoft bipụtara a vidiyo na YouTube na-egosi otu ngwa Office 365 niile si ele anya na ọnọdụ gbara ọchịchịrị ahụ. Na eziokwu bụ na ọ dị oke mma maka ndị anyị na-ejikarị arụ ọrụ na ọnọdụ ahụ zuru oke maka abalị ndị ahụ ebe anyị achọghị ka ekwentị anyị bụrụ ọkụ.
Na vidiyo a na-egosipụta mgbanwe site na ìhè gaa n'ọchịchịrị wee gaa n'ihu na-eweta nke ọ bụla n'ime ngwa amaara ama ama kachasị mma yana ụdị ọhụụ ahụ na-ahapụ ohere maka agba ndị na-egbuke egbuke ma tinye ụda olu dị mkpa maka ahụmịhe onye ọrụ.
Eziokwu bụ na ọ dabara ya n'ụzọ zuru oke na imepụta otu na-ahụ maka ngwa ndị a maka Microsoft ha enwetalarị ọrụ ha maka afọ ole na ole. Dịka isi ọhụụ, S Pen anabatakwala nkwado Outlook. Otu S Pen ị nwere ike ịhụ na ntụnyere nke anyị mere na vidiyo ụbọchị ndị a gara aga ma na-enye gị ohere isoro onye ahịa email a rụọ ọrụ zuru oke.
Na mkpanaka anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya, ewepu Outlook, ngwa ndị a nwere ọnọdụ gbara ọchịchịrịOkwu: Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner na Ime. Ya mere, dịrị njikere iji na ọnọdụ niile Microsoft ngwa ọdịnala na gị gam akporo mobile na otú enwe ọfịs akpaaka na ndị ọzọ imewe ahịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa na Outlook nke mere na ọ ga - eme ya n'oge niile na Office ngwa niile
Samsung Galaxy Home Obere na-amalite mmemme beta